Xaalka Qudus: Aragtida Shiinaha ee ku aaddan go’aankii Trump – Kasmo Newspaper
Xaalka Qudus: Aragtida Shiinaha ee ku aaddan go’aankii Trump
Updated - December 7, 2017 8:02 pm GMT
London (Kasmo), Dowladda Shiinuhu waxay aaminsantahay in go’aankii aqoonsiga Quddus yahay mid aanay dani ugu jirin Maraykanka isla markaana aan waxtar u yeelan Karin nabadda Bariga Dhexe. Sidaasna waxaa qoray maanta, 7da Disembar 2017, Wargayska maalinlaha ah “China Daily” kuna soo baxa afka Ingiriiska.
Faallada aragtida Wargayska (Editorial) oo ku soo baxday Wargayska Shiinaha ee afka Ingiriisiga “The Global Times”, waxaa si cad looga fahmi karaa aragtida Shiinaha ee ku wajahan arrintaan.
Maqaalku wuxuu qeexayaa in go’aanka Trump duminayo dadaalkii Dibolomaasi ee muddada dheer ka soo jiray Falastiin iyo Israel dhexdooda. Iyo waliba kaalintii dhexdhexaadnimo ee Maraykanku muddada dheer ku soo jiray oo hadda soo afjarantay.
Sidaa darteed, tillaabada Trump waxay cawaaqib ku yeelan doontaa mustaqbalka siyaasadeed ee Bariga Dhexe, wargayskuna wuxuu xusayaa sababta ku khasabtay in ay tahay sidii uu u fulin lahaa ballamadii uu qaaday olilhiisii doorashada.
Sida Wargayska Shiinuhu qirayo, hoggaamiyaha Aqalka Cad, ma ahan oo qur ah in uu ballamadiisii fuliyay, ee wuxuu xitaa sameeyay waxyaabo Madaxdii ka horreysay ayan waligood haweysan. Xaqiiqadaasi waxay muujinaysaa dabeecadda dhabta ah ee Donald Trump.
Ilaa intii uu Xafiiska yimid,Maraykanku wuxuu 24kii Jenaayo ka baxay Heshiiskii TPP (Transpacific Partnership), 6dii April waxay duqeeyeen Saldhig Suuriya ah, iyo 1dii Juun Heshiiskii Cimilada Paris, Heshiiskii Nuklearka Iiraan13kii Oktoobar, ugu dambaystiina wuxuu hirgaliyay xayiraaddii 6dii dal ee Muslimka ahaa oo 5tii Disembar 2017, Maxkamadda Sare oggolaatay.
Waxaa la moodaa wax aan la rumaysan Karin, laakiin Trump wuxuu samaynayaa oo qur ah waxyaabihii uu horey u ballanqaaday oo idil. Maxaa haddaba xigi doona?
Haddii Trump sidaas ku sii socdo, “Global Times” wuxuu ka digayaa in ay suuragal tahay in uu awoodda Maraykanka u isticmaalo hadba meeshii aanu ku faraxsanayn dunida.
Tusaale ahaan, hoggaankiisu wuxuu gaarsiin karaa Maraykanka in uu military ahaan u faragaliyo Kuuriyada Woqooyi, haddii Pyongyang aanay ka waantoobin tijaabooyinka gantaalladeeda, fursadaha dagaal uu ku oogi karana aad ayay u sarreeyaan.